WhatsApp dia manandrana ny fifindra-monin'ny tantarany eo amin'ny iOS sy Android | Vaovao IPhone
Toni Cortés | 06/04/2021 10:00 | Fampiharana iPhone
Iray amin'ireo olana ananan'ny mpampiasa matetika rehefa manova ny rafitra amin'ny findainy ny fahafahany mitazona ny vaovao ao anatiny. Mandehana avy Android hatramin'ny iOS ary ny mifamadika amin'izany dia misy ireo lesoka kely ireo.
Ny fifindra-monina ny boky adiresy na angona hafa toa izany dia tena mora. Ny olana dia miaraka amin'ny fampahalalana izay misy ireo fampiharana samihafa. Raha tahiry amin'ny serivera ivelany ny tahirin-kevitra toy izany, toa ny Telegram's, tsy misy olana. Nefa raha toa ka voatahiry ao amin'ilay fitaovana izy ireo, toy ny tranga misy ihany WhatsApp, dia tantara iray hafa. Toa te hanamboatra azy ny mpamorona azy.
WABetaInfo vao namoaka a tatitra izay nohazavainy fa mizaha toetra ny WhatsApp ny fahaizany mamindra tantara ny fifampiresahana eo anelanelan'ny iPhone sy ny fitaovana Android.
Araka ny notaterin'ny tranokala voalaza, ity singa ity dia ampahany amin'ny fanovana stratejika amin'ny fampiharana WhatsApp. Ny orinasa dia nandinika ny fahafaha-mampiasa WhatsApp amin'ny fitaovana marobe amin'ny fotoana iray, ary nanomboka tamin'ny fahaizana izy ireo mifindra monina tantaran'ny chat amin'ny iOS sy Android ary ny mifamadika amin'izany.
Rehefa manandrana mampifandray fitaovana iray izay misy rafitra fiasa hafa amin'ny kaonty WhatsApp ny mpampiasa dia ilaina foana ny manavao ny kinova WhatsApp farany hita ao amin'ny App Store o Google Play, hialana amin'ny lesoka mifanentana amin'ny kinova Android.
Na dia tsy misy fampahalalana momba ny fanandramana an'ity endri-javatra ity aza ary tsy misy daty famoahana azo atao, dia mbola mahaliana ihany ny mahafantatra fa ny orinasa dia mametraka ny ezak'izy ireo amin'ny zavatra efa misy amin'ny fampiharana fandefasan-kafatra hafa, toa telegrama.
Ny fahafaha-mampiasa kaonty WhatsApp mitovy amin'ny fitaovana marobe dia iray amin'ireo fiasa tena angatahin'ireo mpampiasa, ary koa kinova ho an'ny Instagram iPad. Andao hojerentsika hoe iza amin'izy ireo no tonga voalohany amin'ny mpampiasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » WhatsApp dia manandrana ny fifindran-toerana roa amin'ny tantaranao eo amin'ny iOS sy Android